Qaar ka mid ah fikradaha xiisaha leh si loogu guuleysto menus-kaaga Kirismaska ​​| Ragga Stylish
Faahfaahinta liistada kirismaska, marwalba daruuri maahan inaad lacag badan kubixiso. Waxaa jira fursado badan oo loogu talagalay dhammaan dhadhanka.
Waan arki doonaa hadda qaar ka mid ah talooyinka dhammaan dhadhanka, cunto fudud, koorsooyin waaweyn iyo macmacaan.
1 Cunto fudud oo ku saabsan menus-ka Kirismaska
2 Koorsooyinka koowaad
3 Saxanka ugu weyn
Cunto fudud oo ku saabsan menus-ka Kirismaska
Suurtagal ma ahan in la bilaabo liistada Kirismaska ​​iyada oo aan wax fiican lagu bilaabin. Adigoon aad u murugsaneyn, cunto fudud oo qabow, ka munaaqashooyin jacayl lagu sameeyay, volcanoonno cufan, iwm. Fikrado ahaan, waxaad tilmaami kartaa likaha toonta, clams marinera, musag-style mussel, iwm.
Fursadaha kale waa basbaaska piquillo, kaas oo loo qaadan karo kuleyl ama qabow, oo laga buuxiyo isku dhafka ugu badan. Sidoo kale wuu shaqeeyaa digaag salmon ah, si aad ugu faafiso rootiga rootiga, croquettes-ka cuntada badda, iyo fikrado kale oo badan.
Saxanka ugu horeeya Waxay ka koobnaan kartaa kalluun qani ah ama maraq cunto ah, saladh kalluun diiran oo la qiijiyey ama la qiijiyey, isugeyn si taxaddar leh loo diyaariyey, iwm. Cambaar la kariyey looma seegi karo, ama la dubay, ama loogu beddelo cows, kalluun, iwm.
Saxanka ugu weyn
Garabka wan guban baradhada rootida badanaa waa nooc ka hadlaya cuntooyinka Kirismaska. Doofaarka la nuugo ayaa sidoo kale loo isticmaalaa.
Markay tahay kaluunkaWaxaa jira tusaalooyin badan: kalluunka la dubay, kalluunka la dubay ama baaska badda leh baradhada, kalluunka ku jira suugada ama uumiga, salmon ama kalluunka ku jira suugada liinta, hake ku jira maraqa cuntada badda ama maraqa cagaaran, iwm.
Haddii aad rabto saxan weyn oo aan si xun u isticmaalin hilib ama kalluun, bariis leh aargoosatada ayaa fikrad fiican noqon kara.
Macmacaanka Kirismaska ​​ee warshadaha badan ama ka yar ayaa badanaa jira menus badankood. Laakiin sidoo kale waad kari kartaa macmacaanka, sida maraq yicib, mousus nougat, keega ama keega yicibta, iwm.
Ha iloobin dhagaxa wanaagsan, champagne, cider, ama cabitaan kasta oo kale oo dhalaalaya oo lagu dubto.
Ilaha sawirka: Animal Gourmet / Salud Facilísimo
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » dhaqanka » Liisaska kirismaska
Shan dhar jiif ah oo jilicsan oo qurux badan xilliga qaboobaha